भारतमा भेटिएको ‘ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ के हो? कत्तिको खतरनाक? :: कमला गुरुङ :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
भारतमा भेटिएको ‘ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ के हो? कत्तिको खतरनाक?
कमला गुरुङ बिहीबार, वैशाख ९, २०७८, १५:५८:००
काठमाडौं- विश्वलाई त्रसित बनाएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) विभिन्न परिवर्तित स्वरूपमा देखिन थालेको छ। त्यसैले यो भाइरस अहिले विश्वभर अध्ययन र बहसको विषय बनेको छ।
केही समयअघि भारतमा कोरोना भाइरसको ‘डबल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ भेटिएको थियो। जुन तीव्र गतिमा फैलनसक्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छल्न सक्ने खालको भएको वैज्ञानिकहरूले बताएका थिए।
हालै मात्र भारतको महाराष्ट्रमा कोरोना भाइरसको अर्को परिवर्तित स्वरूप भेटिएको छ। भारतको महाराष्ट्रमा ‘ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ भेटिएको हो। विज्ञहरूका अनुसार भारतमा भेटिएको ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट अत्यन्तै खतरनाक खालको देखिएको छ। यो भेरियन्ट तीव्र गतिमा फैलनसक्ने र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छल्न सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ।
भारतमा भेटिएको ‘ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट’ के हो? यसले शरीरमा कस्तो खालको असर गर्छ? कतिको जोखिमपूर्ण छ? लगायत विषयमा धेरैको जिज्ञासा छ।
यही जिज्ञासा हामीले भाइरोलोजिस्ट डा लुना भट्टसँग राखेका छौँ। डा भट्टले दिएको जवाफ उनकै शब्दमाः
भारतको महाराष्ट्रमा देखिएको ‘ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट’लाई’ वेस्ट बंगाल’ पनि भनिएको छ। वेस्ट बंगालमा यो भाइरस पहिलोपटक देखिएकाले यसलाई वेस्ट बंगाल भनिएको रहेछ।
यसलाई ‘भेरियन्ट अफ कन्सर्न’ नभनेर ‘भेरियन्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ भनिएको छ। किनभने, यो भाइरसको बारेमा उनीहरूले अझै अध्ययन गरिरहेका छन्। यो भाइरस भारतको महाराष्ट्रमा फैलिएको छ। यो भेरियन्टको नाम बी१६१८ हो।
पहिला देखिएको डबल म्युटेन्ट भाइरसलाई बी१६१७नाम दिइएको थियो। यो भाइरसमा तीनवटा म्युटेसन देखिएको छ। जुन तीनवटा छुट्टा-छुट्टै भेरियन्टमा रहेको म्युटेसन यो भाइरसमा एउटैमा देखिएको छ।
पहिलाको डबल म्युटेन्ट डरलाग्दो छँदै थियो। त्यसमाथि दक्षिण अफ्रिकाको म्युटेन्ट पनि देखियो। दक्षिण अफ्रिकाको म्युटेन्ट रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई छल्ने र यसले काम नगर्ने भन्ने विशेषता भएको म्युटेसन अहिलेको ट्रिपल म्युटेन्ट भाइरसमा देखियो।
यो भाइरस पहिलाको भन्दा पनि अत्यन्तै तीव्र गतिमा फैलनसक्ने, बालबालिकामा पनि युवाहरूमा जस्तै सर्नसक्ने क्षमता भएको देखिएको छ। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा के छ भने हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरसविरुद्ध बनेको एन्टीबडीले काम गर्दैन। अर्थात् जो व्यक्ति पहिले संक्रमित भई उसको शरीरमा एन्टीबडी बनिसकेको छ, अब त्यो एन्टीबडीले यो ट्रिपल म्युटेन्ट भाइरसविरुद्ध काम गर्दैन या भनौं त्यो एन्टीबडीले यो भाइरसलाई चिन्दैन। त्यही भएर यो डरलाग्दो भयो। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले नै काम नगर्ने देखियो। त्यसैले म पहिले संक्रमित भइसकें, मेरो शरीरमा एन्टीबडी छ भनेर ढुक्क हुन सकिने अवस्था रहेन।
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न भनेको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपले अब काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। यो विषयमा उनीहरू अध्ययन गर्दैछन्। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताले काम गर्दैन छल्न सक्छ भनेपछि खोपले काम गर्ने सम्भावना पनि कम नै देखियो।
यो ट्रिपल म्युटेन्ट भेरियन्ट सबै वर्गका लागि जोखिमपूर्ण देखिन्छ। यसमा भाइरल लोड पनि अत्यधिक देखिएको छ। भाइरल लोडमात्र नभइ यसले निम्त्याउने जटिलता पनि धेरै छ। त्यसैले, यो भाइरस अत्यन्तै जोखिमपूर्ण देखिन्छ।
मानिसहरू संक्रमित भइरहेका छन्। एउटाबाट अर्को व्यक्तिमा अनि क्रमशः अन्य व्यक्तिमा भाइरसहरू सरेको सर्‍यै भइरहेको छ। भाइरस म्युटेसन भइरहेको छ। यसरी भाइरसको जीन पनि मिक्स भइरहेको छ। यसले गर्दा भाइरसलाई आफ्नो रूप परिवर्तन गर्न सहज भइरहेको छ।
भाइरसलाई आफ्नो स्वरूप परिवर्तन गरिरहन हामी आफैंले मौका दिइरहेका छौँ। सरकारले सभा, सम्मेलन, भीडभाड नगर्न आग्रह गरेको छ। तर, हामी भीडभाड गर्छौं। जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्दैनौ। मानिसहरूको लापरवाही यही क्रममा बढ्दै गए भोलिका दिन भाइरसको अन्य रूपहरू पनि नआउँला भन्न सकिन्न।
किनभने, भाइरसले आफ्नो सहजता र बाँच्नका लागि स्वरूप परिवर्तन गरिरहन्छ। यो वातावरण हामी आफैंले पनि बनाइरहेका छौँ। किनभने, रोक्ने कुनै सिपाही र बलियो सुरक्षा निकाय छैन भने त जो जहाँ पनि छिर्न सक्छ। भाइरस पनि त्यस्तै हो, यसलाई रोक्ने कुनै सिपाही र बलियो सुरक्षा निकाय नभए यो जहाँ र जसरी पनि सर्न सक्छ।